Dagaal ka dhacay deegaano dhaca gobolka Baay | SMC
Home WARARKA MAANTA Dagaal ka dhacay deegaano dhaca gobolka Baay
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay wehlinayeen kuwa Maamulka Koonur Galbeed ayaa waxaa ay howlgallo qorsheysan oo amniga la xiriira ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Diinsoor ee Gobollka Baay Waa siday hadalkaudhigeen mascuulin katirsan maamulka KGS.
Ciidamada ayaa waxaa ay sigaar ah howlgallada uga fuliyeen deegaannada,Raaxoole, Biyo-dhale iyo Bandhuub oo dhamaantood hoostaga degmada Diinsoor,waxaana la sheegay in Ciidamada intii ay howlgalka wadeen ay dagaal kala kulmeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab,dagaalkaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Kusimaha Taliyaha Ururka 154aad ee Ciidamada Dowladda Soomaaliya Nuur Cali Maxamed ayaa sheegay in howlgalka ay kasoo qaadeen degmada Diinsoor,isla markaana intii ay howlgalka wadeen ay dagaal kula wareegeen deegaano dhowr ah oo ay horay ugu sugnaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Waxaa uu sheegay in howlgalka uu weli yahay mid ka socda Guud ahaan Gobolka Baay,isla markaana u jeedkiisa uu yahay mid ay uga hortagayaan inay Al-Shabaab lacago ka qaadaan dadka Shacab ah ee ku sugan tuulooyinka hoostaga degmada Diinsoor.
Guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur (Shigshigow) ayaa dhankiisa waxaa uu sheegay in Al-Shabaab ay maalmihii la soo dhaafay soo kordhiyeen lacago ay ka qaadayaan dadka Shacabka ah,isla markaana Ciidamada ay howlgalka fuliyeen, iyaga oo ka jawaabaya cabashada Shacabka waa siduu hadalka udhigay.
Si kastaba howlgalkan Ciidamada Millateriga Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Koonfur Galbeed ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Baay ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay Ciidamadu ay ka wadeen deegaano ka tirsan labada Shabelle.
Previous articleSawirro: Qarax xoogan oo lala eegtay Injineerada dhisaya waddada Muqdisho iyo Afgooye
Next articleWararkii ugu dambeeyay Qarax Caawa ka dhacay Muqdisho